Global Voices teny Malagasy » Manambany Ilay Lehiben’ny Google Teo Aloha Tao Shina, Lee Kaifu Ny Lahatsoratry ny Antoko Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2013 12:07 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Tanora
Namoaka lahatsoratra vao haingana mitondra ny lohateny hoe “Fanontaniana folo hoan'i Lee Kaifu ”[zh] ny gazetibokin'ny antoko “Buildingi” ao Shina, ka ao anatin'izany no anontaniany ny lehiben'ny Google tao Shina teo taloha ny mombamomba ity olo-malaza (Lee Kaifu) ao amin'ny aterineto ity, ny mampavitrika azy, ny fanehoan-keviny ampahibemaso, ary ny heviny ara-politika.
Mitsikera ny fahadiovan'ny fitondran-tena sy ny heviny ara-politika, toy ny fiarovan'i Lee ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanohanany ireo tanora liberaly Shinoa tahaka an'i Han Han ny lahatsoratra nosoratan'i Zhou Xiaoping, ilay milaza tena ho mpamakafaka ny harinkarena faobe. Nanontany ihany koa izy raha marary ny homamiadan'ny liofotsy (lymphome) i Lee.
Noho ny fananany mpanaraka maherin'ny 51 tapitrisa ao amin'ny Weibo, dia olo-malaza miava-piteny i Lee izay maneho hevitra amin'ireo lohahevitra maro isan-karazany ao Shina ary mifampiresaka amin'ireo tanora Shinoa. Mandrisika ny hevitra mahaleotena i Lee, izay matetika manohitra ny hasin'ny fomba amam-panao Shinoa taloha. Hoy izy nanoratra [zh] tao amin'ny Sina Weibo:
Pikantsarin'ny pejy Sina Weibo an'i Lee Kaifu
Sokajian'ny Shinoa ho toetra tsara amin'ny ankizy ny “fankatoavana”. Saingy tiako raha manan-tsaina (mahay mandinika) ireo zanako fa tsy mankatò fotsiny ihany. Afaka manaraka an-jambany ny hafa ny ankizy mankatò, fa tsy voatery mahatakatra ny marina, ahoana no fomba hiatrehan'ireo ankizy ireo ny olana eo amin'ny fiarahamonina rehefa lehibe. Hihaino anao ireo ankizy mahay mandinika satria mihevitra izy fa manana ny marina ianao, fa tsy hoe satria matahotra anao izy ireo, tsy izany ve no tsaratsara kokoa?
Nosafidin’ i Sina ho bilaogera madinika mahatarika indrindra tamin'ny fiandohan'ity taona ity i Lee. Na dia izany aza, nisy ny aloka nianjera teo amin'ny habaka Shinoa raha nanambara i Lee fa tratran'ny aretin'ny homamiadan'ny liofotsy izy tamin'ny volana Septambra 2013.
Hoy i Zhou, nanoratra ny tsikerany:
Matetika ianao nilaza fa mampiely hery azo antoka sy manoro lalana ny tanora, kanefa manana fitondra-tena ratsy ireo tanora notarihinao, manaparitaka fihetseham-po mandiso fanantenana feno fankahalàna goavana an'i Shina.
Nalain'ny fampahalalam-baovao Shinoa izany lahatsoratra izany avy eo ary navoakany tao amin'ny Sina Weibo. Mipaka any amin'ny lahatsoratra sy fanehoan-kevitra manontany ny fitondra-tenany sy ny fahavitrihany ny fitadiavana ny anarana Shinoa an'i Lee Kaifu ao amin'ny Baidu.
Na dia notsipahin'ireo mpisera Weibo marobe aza ny tsikera, maro ireo fanehoan-kevitra mangataka fanazavana avy amin'i Lee, izay fantatra fa fanehoan-kevitra nokaramain'ny Antoko 50 Cent , fikambanana izay heverin'ny sasany fa anisan'ny mpikambana ao i Zhou.
Blogger “GK Tongrenyuye” nanoratra [zh] hoe:
Tsy mpanaraka an'i Lee Kaifu aho, saingy tafahoatra loatra ilay “fanontaniana folo ho an'i Lee Kaifu”. Tsy mino aho fa manana diary miafina i Big Vs, raha ny marina dia ireo mpiserasera no nampiakatra azy teo amin'ny sorony. Tsy afaka mandà ianao fa manome hery azo antoka ireo fanehoan-kevitr'i Lee, izay miteraka vokatra azo antoka. Raha maro ireo olona mamaky ny lahatsoratry ny olona tahaka an'i Lee, mihamaro ihany koa ny resadresaka miseho. Manome hevitra ny mpamaky ny bilaogy madinika an'i Lee Kaifu fa afa-mampatanjaka ny olona, fa raha milaza ny fampahalalam-baovaom-panjakana kosa dia ny ny governemanta ihany no matanjaka.
Tonga hatramin'ny famoronana lahatsoratra mitovy izany izay mitondra ny lohateny hoe “Fanontaniana folo hoan'i Zhou Xiaoping ”[zh] ireo bilaogera sasany, ary manontany kokoa ny antony manetsika an'i Zhou.
Tsy novalian'i Lee mivantana tao amin'ny aterineto ilay tsikera. Tamin'ny 14 Oktobra, nilaza andinin-tsoratr'i T. H. White “The Once and Future King (Ilay Tokana sy Mpanjaka Hoavy) ” izy:
Ny zavatra tsara indrindra raha te-halahelo dia ny mianatra zavatra. Mety hiha-antitra ianao ary hangovitra ny vatana, mety ho tafafoha ianao amin'ny alina hihaino ny fikorontanan'ny lalandrà, mety manembona ny olo-tokana maminao ianao, mety hahita tontolo momba anao ravan'ny hadalan'ny ratsy ianao, na koa mahita ny hasintsika voahitsakitsaka ao anatin'ny tatatry ny olona kely saina. Zava-tokana ihany no atao amin'izany – ny mamantatra. Fantaro hoe nahoana izao tontolo izao no mikorontana ary inona no mampikorontana azy. Izany no zava-tokana izay tsy mampandreraka ny saina mihitsy, tsy mba mahalasa adala, tsy mba mampijaly, tsy mampatahotra na mampiahiahy mihitsy, ary tsy hanofy mihitsy mba manenina .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/31/53240/
 Fanontaniana folo hoan'i Lee Kaifu: http://dangjian.cn/jrrd/xwmt/201310/t20131008_1506481.shtml
 Han Han : http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Han
 nanoratra : http://weibo.com/1197161814/Ad6AtnABC?mod=weibotime
 Antoko 50 Cent: http://en.wikipedia.org/wiki/50_Cent_Party
 nanoratra : http://weibo.com/2089800791/AdOi61tJe
 Fanontaniana folo hoan'i Zhou Xiaoping: http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2013/10/15/a984034.html
 nilaza : http://weibo.com/1197161814/AdYwh7myB?type=like#_rnd1381896309199
 The Once and Future King (Ilay Tokana sy Mpanjaka Hoavy): http://en.wikipedia.org/wiki/The_Once_and_Future_King